-Agwa anyị banyere gị
-Agwa anyị banyere gị 3 afọ 6 ọnwa gara aga #7
Ya mere, onye o bula. Aha m bụ David na m bụ onye nchịkọta Forum ọhụrụ. Echere m na ụzọ kacha mma ị ga-esi kwụsị ọrụ ụfọdụ bụ imeghe isiokwu a na izute gị niile.
-Agwa anyị banyere gị, ihe mgbe ị na-eche dị mkpa.
Ndị na-esonụ ọrụ (s) kwuru Ekele dịrị Gị: rikoooo, PADA52, ricbru, txrace
-Agwa anyị banyere gị 3 afọ 6 ọnwa gara aga #14
Mmadụ Bịa na Rikoooo otu,
I'am Erik Onye Okike na njikwa nke Rikoooo.com.
M n'ezie mmasị ka ị ebe a, nke a bụ gị Forum. ị na onye isi
M ga-annouce anyị ọzọ ala ịgwa onye ọ bụla banyere ọhụrụ a forum.
Obi ụtọ na ụgbọ elu na onye ọ bụla
-Agwa anyị banyere gị 3 afọ 6 ọnwa gara aga #15
Ndewo, aha m bụ Aan
M rụpụtara ụgbọelu enthusiast si Indonesia
Nice izute gị niile
-Agwa anyị banyere gị 3 afọ 6 ọnwa gara aga #16
-Ekele unu niile otú anya. -Atụ anya ịhụ ọtụtụ ihe, ọtụtụ ihe ndị ọzọ posts na ọtụtụ ndị ọzọ ọrụ ebe a na-eme n'ọdịnihu.
-Agwa anyị banyere gị 3 afọ 5 ọnwa gara aga #35
Ndewo aha m niile bụ Terry (FCAIR) Abụ m onye isi ezumike nka USAF Crew. Naanị m nwere mmasị FSX sim efefekwara mgbe ọtụtụ afọ gachara. Nnukwu saịtị ọhụrụ, nbudata dị egwu. Obi ụtọ na-efe efe na onye ọ bụla
Ndị na-esonụ ọrụ (s) kwuru Ekele dịrị Gị: rikoooo, Gh0stRider203
-Agwa anyị banyere gị 3 afọ 5 ọnwa gara aga #36
Hi - Abụ m John si n'ebe ndịda nke UK. Ugbu a lara ezumike nká, a na-agba ọsọ simulator mbụ m na ZX81, nke teepu na teepu, nke nwere B737 (nke ọma na altimeter na ASI) nke na-ese onyinyo ndị na-efe efe na-agba n'etiti mkpọchi A ma gbochie B na nwa na ọcha - ma ọ bụrụ na ị O mere ka o zie ezie na ị hụrụ "ihe ngosi" ahụ, oji ọzọ na-akpọ C. Kemgbe ahụ, enwere m ohere ọ bụla nke Microsoft mepụtara, na-enwe ọganihu site na kọmputa dịgasị iche iche site na 8086 site na 384, 486, Pentium, gbakwunye na ole na ole, na M7 m ugbu a. Enwere m ikikere nke onwe m nke m nwere otu narị awa na 152s na PA28s - anaghịzi adị ugbu a n'ihi ụgwọ ụgbọelu na-aga ebe a na UK. Nwa m nwoke na-ejikwa Flightsims, nweta ahụhụ ahụ ma mụta iji efe, ma ugbu a na 4000 awa n'okpuru belt ya (ezigbo) A319 / 320s na-aga ịga maka tiketi Captain. Na-agafe Rickoooo site na freeware Canary Islands ebe dị mma - ekele dị ukwuu maka nke ahụ. Ọhụụ ịhụ akwụkwọ nke Bekee dị ka n'agbanyeghị na ọ dịghị ihe karịrị 50 kilomita site na France nghọta m banyere asụsụ ha adịghị mma.
Ndị na-esonụ ọrụ (s) kwuru Ekele dịrị Gị: rikoooo, alogie
Ndumodu ikpe azu: site viscount.
-Agwa anyị banyere gị 3 afọ 5 ọnwa gara aga #37
Hello FCAIR na viscount,
Daalụ maka okwu gị na-anabata ndị ọhụrụ nwee, anyị na-ata ịnụ ọkụ n'obi na ụtọ na unu n'ebe a, egbula biputere ọhụrụ isiokwu na-arịọ maka enyemaka iji na obodo. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị chọrọ inyere ndị ọzọ aka ọ ga-abụ oké, gị ihe ọmụma dị ezigbo welcome ebe a, na anyị ga-n'anya ka nwere ụfọdụ otú na-,-efe efe ihe, Nkuzi na na posted na forum. Kpukpru etịbe ga-eme ka ndị obodo obi ụtọ.
Ndị na-esonụ ọrụ (s) kwuru Ekele dịrị Gị: viscount, FCAIR
-Agwa anyị banyere gị 3 afọ 5 ọnwa gara aga #39
N’oge a, abụ m nwa akwụkwọ dịka m nweburu. O nwere ike were m ntakịrị tupu m nweta ins na ihe niile ọpụpụ FSX mana oge obula m nwere ike inyere mmadụ aka O gha eme m obi uto.
Blue efegharị onye ọ bụla ..
-Agwa anyị banyere gị 3 afọ 5 ọnwa gara aga #44
Ọzọkwa, Bata Rikooo.
-Agwa anyị banyere gị 3 afọ 4 ọnwa gara aga #153
Hiya, aha m ihuenyo bu PAYSON. Anọwo m na-eji simulators kọmputa ruo oge ụfọdụ ugbu a, amaliteghachiri iji otu mbipụta Ubisoft's Sturmovik IL2. Agbagoro na 10 afọ na WarBirds (nyeere ha aka n'ezie site n'ike mmụọ nke onye ọgụ ha chọrọ ịmebata na egwuregwu. M mechapụrụ ụfọdụ ihe egwuregwu na-egwu Ubisoft's ọgụ dị elu karịa sims. M garafere ihe dị ka afọ 5 na World of tank, ka na-egwu ya. (na-akwụ ọnụ) M ji ya FSX ihe dị ka afọ 8 ma ọ bụ 9 afọ wee nwee ịhụnanya na usoro ha. M ka so na WoT ma ka na-agbakwa ozi na Ubisoft. Ugbu a m chọpụtara gbasara ndị gị, ọ dị mma ịnwe nnukwu ụgbọ elu iji fee.
Azụ ka ígwé ojii,